IINGCAMANGO ZEGUMBI LOKUCOCA IGUMBI ELINGAPHANTSI (ISIKHOKELO SOYILO) - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Iingcamango zeGumbi lokuCoca igumbi elingaphantsi (Isikhokelo soYilo)
Iingcamango zeGumbi lokuCoca igumbi elingaphantsi (Isikhokelo soYilo)
Apha sabelana ngeendlela ezahlukeneyo kwigumbi lokuhlambela igumbi kubandakanya uyilo olugqityiweyo nolungagqitywanga.
Igumbi lokuhlamba lihlala liyindawo ekhaya esingacingi ngayo ngokwenza ubuhle. Kodwa ngokuqinisekileyo yinto ebalulekileyo kodwa exhaphakileyo ekhaya. Kungenxa yokuba le ndawo kulapho konke ukucocwa kweempahla kwenzeka (kwaye ngamanye amaxesha, ukugcinwa kwezinto zokucoca, nako), kuya kuba luncedo kwaye kube nakho ukuyigcina icocekile, icwangcisiwe kwaye ikwimo ephezulu yencam.
Ubume bayo nayiphi na indawo ngokuqinisekileyo ichaphazela imeko yabasebenzisi bayo. Yenza uhambo lwakho lokuya kwigumbi lokuhlambela uzive ungoyiki kangako ngokwenza indawo ibe yindawo entle ngakumbi nenomtsalane. Ngapha koko, uninzi lwezifundo kunye nophando lubonisa ukuba ukungqubana kuyaphazamisa ingqondo kwaye kwenza kube nzima ngakumbi ukugxila kwimisebenzi.
Olunye uphononongo lukwahambelana nococeko / umbutho wekhaya kwimpilo yomntu ngokwasemzimbeni nangokwasengqondweni. Igumbi lokuhlambela linokubonakala ngathi liyindawo encinci ekhayeni lethu, ukulungiswa kwexesha elide kuya kuba yinzuzo kuwe.
Uhambo oluya kwigumbi lokuhlambela impahla linokubonakala ngathi ngumsebenzi wothusayo, kodwa oko akuthethi ukuba igumbi lakho lokuhlambela iimpahla kufuneka libukeke lilihlazo. Yinike ubumnandi kunye nomoya oqaqambileyo ngokusebenzisa imibala ekhanyayo kunye noyilo lokudlala ngakumbi. Igumbi elincinci lokuhlambela kulo mfanekiso ungentla longeza ukubamba kwesilayidi eluhlaza okwesibhakabhaka ezindongeni zalo, komeleza indawo. Iikhabhathi ezimhlophe kunye nokongezwa kweempawu zomthi kunye nezitena ezimhlophe kunika esi sithuba imvakalelo ehlaziyayo nenamandla.
Iingcamango zeGumbi lokuhlamba iimpahla ezingagqitywanga
Ukugqitywa kweGumbi lokuGcina iimpahla ezingaphantsi
Iingcamango zokukhanyisa igumbi elingaphantsi kwegumbi
Igumbi loLondolozo lweGumbi loLondolozo
Igumbi lokuhlambela igumbi elingaphantsi
Igumbi lokuhlambela elingaphantsi kunye neGumbi lokuhlamba iimpahla
Iingcamango zokwenza igumbi elingaphantsi kwegumbi lokuhlamba
Isilayidi siphuma kwiRack
Ukuhlamba impahla ngeShelf yokuGcina yokuKhupha
Tsala-Out Shelving In-phakathi yomsuki weengubo & isomisi
Ukuhlamba iimpahla ngeSylish Backsplash
Indawo yokuhlambela yokuKhangela kweFama
Ukuhlamba iimpahla eWall Niche
Igumbi lokuhlambela iimpahla kunye neBhodi yokuKhuphela ngaphandle
Igumbi lokuhlamba iimpahla neSiqithi
Ukutyibilika kweBarn Door
Kuqhotyoshelwe kwigumbi lodaka
Umxholo wombala wokuKhanya
Ukuhlamba iimpahla ekhitshini
Iingcamango ezincinci zeGumbi lokuhlamba iimpahla
Ukucwangciswa okulula kokuhlamba kugxila kwiindawo ezicocekileyo nezicacileyo, kungoko iikhabhathi ezininzi zokugcina ukugcina ukungcola kude. Isebenzisa iithayile zekheram emigangatho ukuze inike indawo imvakalelo eshushu, kwaye yongeze ukuhonjiswa eludongeni kunye nokubuyela umva okwenziwe ngezitena ukubuyisela igumbi imvakalelo emnandi ngakumbi kunye nokucoceka.
Uninzi lwamagumbi okuhlamba iimpahla abekwe kwigumbi elingaphantsi, kwaye ngokwesiqhelo, amagumbi okuhlamba impahla angaphantsi angagqitywanga anemigangatho ekhonkrithi enomkhwa wokubanda nobumanzi. Ngelixa ubungakanani bomsebenzi bubonakala boyike, jonga oku njengeseyile engenanto. Emva kwayo yonke loo nto, ukuba ayinayo i-flooring ekhoyo, iyakongela ixesha kunye nomzamo wokutshintsha indawo esele ikhona.
Igumbi elikhulu lokuhlambela elingaphantsi komfanekiso ongentla ligcina ubuhle balo boshishino ngokugcina iindonga, umgangatho kunye nophahla lungagqitywanga kwaye longeze iziqwenga zeshishini ezinje ngesitayile seshishini.
Nazi ezinye zeengcamango zokuphucula amagumbi akho okuhlamba angaphantsi angagqitywanga:
Khetha umxholo -Khetha umxholo wemibala ukugcina uyilo oluhambelanayo.
Yongeza ukukhanya -Ukukhanyisa ngokuqinisekileyo kwenza umahluko omkhulu nakweyiphi na indawo, kwaye igumbi lokuhlamba akukho nto ikhoyo. Iindawo ezingaphantsi kwendlu azinazo iifestile zokukhanya kwendalo, ke ukukhanya kwezixhobo ngokuqinisekileyo kuya kunceda ukwenza igumbi lakho lokuhlamba impahla liwulungele umsebenzi walo.
Ipeyinti - Painta iindonga, isilingi okanye imiqadi. Sincoma ukusebenzisa imibala ekhanyayo ukukhanyisa indawo.
Yongeza indawo yokugcina -Ukuba iikhabhathi zakho / ugcino lwakho alonelanga, ucinga ukongeza ngaphezulu ukugcina ubucukubhede kude. Khetha ikhabhathi enika ubuninzi bokugcina obunokubakho bokucoca iimveliso kunye nezixhobo.
Yongeza imiphezulu yeetafile -Khetha uhlobo olomeleleyo lwezinto ezinje ngegranite, okanye Imiphezulu yeetafile zekartz .
Yongeza umgangatho - Kuxhomekeke kwiimfuno zakho kunye nemeko yangoku yomgangatho wegumbi lakho lokuhlamba impahla, cinga ukongeza / ukubuyisela ngezinto ezizinzileyo ezifanelekileyo kwiindawo ezimanzi.
Yongeza izixhobo zodonga - Ezi zisetyenziselwa ukuxhoma impahla kunye nokugcina izinto ezifana nebhodi yoku-ayina.
Ukuba unesithuba esincinci kakhulu, unokucinga ngokubeka isitya sokuhlamba esizimeleyo endaweni yento eyakhelweyo yokugcina indawo. Oku kukuvumela ukuba ubuye ubeke kwakhona ngokulula indawo yakho ukuba ufuna ukulungiswa kwakhona.
yimalini ilokhwe yomtshato
Ukuba awunalo uhlahlo-lwabiwo mali olwaneleyo lweekhabhathi kunye nolunye utshintsho kulwakhiwo, khumbula ukuhamba ngomgaqo wokuncinci ungaphezulu.
Ukuba ukuzama ayisosimbo sakho, unokuhlala uhlengahlengisa isitayile esele sikhona sendlu yakho okanye ikhitshi kwigumbi lakho lokuhlamba. Khumbula ukunika indawo yokugcina eyaneleyo ukuze ube nendawo yokuhamba kwigumbi lokuhlamba.
Kumagumbi okuhlamba iimpahla agqityiweyo, oko kunokuthetha ukuba ngumsebenzi omncinci ekufuneka wenziwe okanye ngaphezulu, kuxhomekeka kwimeko akuyo ngoku. Izinto ezibalulekileyo ekufuneka uzijongile, ngaphambi kokwenza utshintsho zezi zilandelayo:
Jonga imibhobho yakho kunye nomsele Ukuchitheka kunye nemijelo evaliweyo kunokubangela ukonakala kwigumbi lakho lokuhlamba. Qiniseka ukuba oku kuyenziwa ngaphambi kokuba uhlaziye
Jonga umgangatho okhoyo - Ukuba i-flooring yakho yangoku i-laminate, iithayile zekhaphethi okanye umthi onzima, cinga ukuzitshintsha njengoko ezo zinto zizezona zimbi ukuzisebenzisa kwimimandla efumileyo / emanzi njengokuhlamba
Jonga ukugcinwa - Ngaba unayo indawo eyaneleyo? Ufuna okungakumbi kangakanani?
Ukujonga ezo zinto zintathu kuya kukunceda uchonge ezona ndawo ziphambili zifuna ukuphuculwa kwindawo yakho yangoku.
Igumbi lokuhlambela eliqhelekileyo langoku lineempawu zekhabhathi emnyama kunye neglasi yokubuyela umva kunye nekhawuntari emhlophe yequartz. Ungayiphucula inkangeleko yegumbi lakho elingaphantsi kwaye uyenze ngakumbi i-chic ngokusebenzisa umbala omnyama. Eli gumbi liphantsi lihlanjwa libukeka lihle kuba licocekile kwaye linombala omnyama.
Njengoko Igumbi lokuhlambela liyindawo esebenzayo / esebenzayo, kubaluleke kakhulu ukuba ube nezibane ezigqwesileyo, kwaye ungcono nokuba unezibane. Izibane zemood okanye izibane ezizodwa ezinokufakwa, kodwa zingasebenzi okanye ziyimfuneko ngokuxhomekeke kwinto ofuna ukuyiphumeza.
Nazi ezinye iindlela zokukhanyisa ezicetyiswayo:
Ngaphantsi kwekhabhinethi ukukhanya -Le nto iluncedo kakhulu kulo naliphi na igumbi lokuhlamba. Ukuba unayo iikhabhathi zakho esele zifakiwe, cinga ngokufumana uhlobo lwe-plug-in phantsi kwezibane zekhabhinethi. Qinisekisa ukuba kukho indawo efikelelekayo apho ufuna ifakwe khona. Kodwa ukuba unayo izakhono ezithile ze-DIY, uqesha ingcali okanye ufaka nje iikhabhathi ezintsha, jonga ukongeza izibane ze-LED ezakhelweyo ukucoceka
Izibane zepaneli ze-LED - endaweni yokusebenzisa ibhalbhu, iphaneli ye-LED iya kufaka ngokulula kwaye ivelise ukukhanya okuqinileyo. Unokukhetha phakathi kweemilo ezahlukeneyo kunye nobukhulu, phakathi kwentaba yokugungxula kunye nokukhethwa kokunyuka kwentaba, kuxhomekeke kwindawo yokufaka.
Izibane ezijingayo -Ukuba awunasilingi kwindawo yakho yangaphantsi yokuhlamba iimpahla, izibane ezixhonyiweyo zilukhetho oluhle kulula ukuzifaka.
Isitshixo sombutho kukwazi / ukubala zonke izinto onazo kwisithuba ukuze umisele eyona ndawo yokugcina yokugcina. Landela esi sikhokelo silula ukukunceda uququzelele igumbi lakho lokuhlamba:
Dwelisa zonke izinto kunye neemveliso ezigcinwe kwigumbi lakho lokuhlamba.
Uhlobo lwezinto onazo kuluhlu lokumisela ukuba zeziphi izinto ezizakugcinwa kunye. Umzekelo: Zonke izicoci ezivuliweyo kunye nezithambisi zamalaphu kufuneka zibekwe ndawonye. Iingxowa zokuhlamba iimpahla, iibhola zokuhlamba kunye nezinye izinto zokuhlamba iimpahla kufuneka nazo zibekwe ndawonye kwaye kufuneka zifikeleleke ngokulula. Izinto zesitokhwe kunye neearhente zokucoca ezomeleleyo kufuneka zigcinwe kude, apho abantwana bangenakufikelela khona.
Qinisekisa ukuba unendawo eyaneleyo yokugcina izinto zakho. Ukuba ewe, qala ucwangciso lwakho lokugcina ngaphambi kokuphunyezwa.
Iibhasikithi kunye neekreyiti yindlela ephantsi kwaye iyindlela yokugcina igumbi lakho lokuhlamba licocekile kwaye licwangcisiwe. Indawo elula yokuhlamba isebenzisa iibhasikiti zeplastiki endaweni yokugcina evaliweyo ukufikelela ngokulula kunye nokubonakala.
Olunye uhlobo olukhulu kwiibhasikiti zeplastiki kunye neebhokisi zebhokisi ziya kuba yinto yokugcina impahla. Lo mzekelo ubonisa iibhokisi zokugcina iimpahla ezifakwe kwisitolo sensimbi esithengiweyo ukugcina izinto zihlelwe kwindawo yokuhlamba iimpahla. Olu khetho kulula ukuluqhuba, kwaye lufikeleleke kakhulu, nalo!
Xa ukhetha ukulala phantsi kwegumbi lakho lokuhlamba, gcinani engqondweni ukuba le ndawo ifumile kwaye iyakwazi ukuvuza amanzi, ngoko khetha izinto ezinokusetyenziselwa indawo emanzi.
Ngokubanzi, zama ukunqanda oku kulandelayo: iiLaminates, iinkuni eziqinileyo, iinkuni ezenziwe ngobunjineli kunye nekhaphethi.
Izinto ezifanelekileyo zokusebenzisa i-vinyl, iileyili zeceramic kunye nelitye lendalo. Ukuba ufuna i-cushion ethambileyo yeenyawo zakho, unokongeza nje indawo encinci yombhoxo ngephedi yerabha ukuze ugcine ubungqina bokuba bungashukumi.
Igumbi lokuhlambela lisebenzisa ukubukeka komthi okwenziwe ngetreyini, okuhlala ixesha elide kwaye kunganyangeki kakhulu. Ibala elimnyama lomthi elisetyenziswe kwiikhabhathi zeli gumbi lokuhlamba linika isibheno esihle kakhulu kwaye sihle, ngaphandle komsebenzi waso.
Ukongezwa kwekhawuntara enkulu yesiqithi yokusonga, ukuhlela okanye ukuayina iimpahla ngumbono olungileyo ukuba unendawo eyaneleyo yawo. Inokusebenza njengendibaniselwano yokuhlamba kunye igumbi lobugcisa .
Ukuya kwinkangeleko entle kodwa yangoku yeMeditera, le ndawo yangaphantsi yokuhlamba iimpahla ineetayile zesamente ezipeyintwe ngesandla, zonke iikhabhathi ezimhlophe ezifakwe ipleyiti eneziphatho zobhedu kunye neetayile ezimhlophe zangaphantsi zodonga. Ukongezwa kwezixhobo ze-wicker kunye neenkuni zongeza umnwe wobushushu bendawo ngelixa ugcina isibheno sayo esiqhelekileyo.
Ubume obahlukeneyo kunye neepateni ezifumaneke emgangathweni kunye neendonga zeli gumbi lokuhlamba lingaphantsi kunika isibheno esinamandla kakhulu. Umzekelo we-chevron omnyama weethayile zeceramic emgangathweni ugcwalisa ngokugqibeleleyo iindonga ezimhlophe ze-shiplap. Ukugqiba ukujonga okwethutyana ziikhabhathi zentsimbi eziluhlaza okwesibhakabhaka kunye nemiphezulu yeetafile zebhloko zokugqiba.
Nazi izinto ezimangalisayo kwigumbi lokuhlambela elinokukhuthaza ukuba uyile okanye wenze i-DIY yokuhlamba impahla!
Lo ngomnye umzekelo omkhulu weskimu sombala omnyama kwigumbi lokuhlamba. Ukutshatisa iiwasher ezimnyama, iikhabhathi zomthi nazo zazinombala omnyama kwaye indawo encinci yokuhlamba ekoneni ikwakhona emnyama imiphezulu yeetafile lenyengane kunye nesiseko esimnyama esimnyama.
Bhangqa amatye akho eetoni zomhlaba kunye neekhabhathi eziluhlaza ezimnyama ukwenza ezo zinto zintle kodwa zisencinci kunye ne-chic vibes. Isixa sokugcina esikhoyo sinceda ukugcina indawo icocekile kwaye ingaxinani, ikuvumela ngakumbi indawo yokuhamba.
Umxube weentlobo ezahlukeneyo zokugcina iindawo ulungile kubantu abenza imisebenzi engaphezulu kwigumbi lokuhlambela impahla kunokucaca nje ukuba ‘ol laundry. Ubungakanani beli gumbi lokuhlamba linika indawo eyaneleyo yokugcina eyongezelelweyo kunye nendawo efanelekileyo yoku-ayina. Inenxalenye yendawo enikezelwe ekubeni yi- igumbi lodaka ngezibiyeli zodonga zokuxhoma iimpahla emva kokuhlamba impahla okanye uku-ayina!
Umnyango omkhulu weglasi waseFrance oya kwigumbi lokuhlamba yindlela entle yokwenza ukuba uzive ungaphantsi. Igumbi lokuhlambela liya kuyilo oluqhelekileyo lomthi kunye nemabhile emhlophe ehambelana ngokugqibeleleyo nazo zonke iinkcukacha zokwakha zekhaya.
Le ndawo encinci yokuhlamba iimpahla ihleli ngaphezulu komgangatho wokhuni oluqinileyo, ke gcina imigangatho yakho yomthi ikhuselekile, yeyona nto ilungileyo ukuzijonga rhoqo imibhobho yakho ngalo naluphi na uhlobo lokuvuza, ukunciphisa ukubakho komonakalo wamanzi. Izinketho ezininzi zokugcina kolu loyilo kubandakanya iishelufa ezivulekileyo ezineetreyi / abaququzeleli kunye neekhabhathi ezingaphezulu kunye neeshelfu.
Le yenye ingcinga entle yamagumbi okuhlanjwa, ukuba awukabinayo indawo okwangoku, mhlawumbi igumbi lokuhlambela elingaphezulu / leendwendwe liya kuba nendawo eyaneleyo yezixhobo zakho! Jonga nje indlela lo mzekelo usenendawo eninzi eshiyeke nasemva kokuzisa oomatshini naye.
Le kwikona incinci kakhulu yegumbi lokuhlambela yaguqulwa yangunook yokuhlamba. Ukuze ingancamathelisi okobhontsi onobuhlungu, oomatshini abamhlophe babesetyenziselwa ukudibanisa inkangeleko yangoku yendawo yonke yokuhlambela.
Imvelaphi U-Becky Rose
Yiya kukhanya okukhanyayo nokuhombisa ngale nhlanganisela intle yeminti eluhlaza kunye nabamhlophe kwigumbi lakho lokuhlambela elingaphantsi! Umbala omtsha we-mint osetyenzisiweyo kwiikhabhathi uyenza ibonakale icocekile kwaye ihlaziyekile kunokuhlamba iimpahla! Umbala opholileyo unefuthe lokuthomalalisa elinokushiya ungaphantsi koxinzelelo nasemva kokwenza umsebenzi wendlu!
Imvelaphi Indlu eyenziwe ngomthi
Eli gumbi lihle lokuhlamba iimpahla alidibanisi kuphela umatshini wokuhlamba kunye nesomisi kuyilo olwakhelweyo, kodwa likwadibanisa nesilayidi sokomisa isilayidi somsebenzi osebenza kakuhle wasekhaya.
Uninzi lwethu, iikhabhathi kwigumbi lokuhlambela impahla zisetyenziselwa ukugcina kungekuphela nje isepha yokuhlamba kunye nezithambisi zamalaphu, kodwa kunye nokugcina izixhobo zokucoca kunye neearhente zokucoca. Iikhabhathi ezisetyenziswe kweli gumbi lingaphantsi lokuhlamba impahla ziyawuqonda umsebenzi onjalo, kwaye ke zicwangcise izinto zangaphakathi zeekhabhathi ukulungiselela indawo esetyenziswa ngayo. Ishelufu yokugcina ikhutshiwe yindlela ecocekileyo nekhuselekileyo yokugcina iiarhente zokucoca kude nabantwana, ngelixa ikhabhathi ende ivumela indawo eyaneleyo yokugcina iimop kunye nezinto zokucoca.
Imvelaphi Ifektri yeCloset eChicago
Ishelufu yokutsala ibekwe ngokufanelekileyo phakathi kwewasher kunye neyomisa, ukuze zonke iimpahla zokuhlamba iimpahla kunye nezinto ezahlukeneyo zibe lula ukufikelela kuzo.
Imvelaphi Uyilo olucocekileyo
Le nook ibukeka ngathi iyayandisa indawo encinci ekuyo. Iithayile zentsimbi ezibuyela umva 'ezibonakalisa umphezulu zenza ukuba isithuba sizive sikhulu kancinci kunokuba sinjalo. I-slab ye-countertop emhlophe yafakwa ngaphezulu kwe-washer / dryer, kwaye indawo ephezulu yayisetyenziswa njengeekhabhathi kunye nendawo yokuxhoma iimpahla, ukudala indawo yokugcina indawo engentla.
Imvelaphi Amakhaya eCopper
Yiya kwi-retro yendlu yefama ngokudibanisa isitya sokuhlambela esinegumbi lokuhlambela. Sebenzisa esi sithuba sincinci ukuhlamba iimpahla ezintle, iimpahla zangaphantsi, okanye mhlawumbi uhlambe nenja yakho encinci?
Imvelaphi USeattle umiselwe ukuThengisa
Iindonga ezenziwe ngemarigold zongeza incasa eyahlukileyo kumxholo omnyama nomhlophe wekhabhathi esetyenziswa kweli gumbi lokuhlamba. Umatshini wokuhlamba kunye nokomisa kwabekwa kumanqwanqwa aseludongeni, kwaye inyuswe kancinci emgangathweni, yenza ukuba iingcango zomatshini zifikeleleke ngakumbi kwaye zilula ngasemva, ngakumbi kubantu abade.
Imvelaphi Ukubuyiselwa kwenyani
Iikhabhathi zanamhlanje zeemodyuli ziza ziluncedo, ngakumbi xa umfutshane kakhulu kwisithuba nasekugcinweni. Igumbi lokuhlambela libonisa ukukhutshwa kwebhodi yoku-ayina, efihliweyo kwidrowa. Xa ingasetyenziswa, ibeka kude ngokulula kwaye ayithathi ndawo ngokungeyomfuneko kwigumbi lakho lokuhlamba. Kukwakho nembala I-arabesque tile backsplash ukongeza umahluko kwikhabhathi emhlophe.
Iithayile zesileyiti ezimnyama zonyusa ubuhle obulula beli gumbi lincinci lokuhlamba. Iikhabhathi ezimhlophe kunye neendonga ezineetayile ezimhlophe zangaphantsi kujongeka ziqaqambile ngakumbi ngenxa yomgangatho omnyama kunye neengcango. Isiqithi esincinci sisongezo esihle sokwahlula indawo, kunye nokusebenza njengendawo esebenzayo onokuyisebenzisa ukulungiselela iimfuno zakho zokuhlamba.
Ukuba awunayo indawo yegumbi lokuhlamba lonke, le nook yokuhlamba ngumbono omkhulu. I-nook inendawo eyaneleyo yokuhlanjwa ngokuthe nkqo kunye nesomisi kwaye inokufihlwa kusetyenziswa sliding umnyango barn .
Ukuba i-stile yakho yeyangoku, le yeyona ndlela ilungileyo eya kumnyango wokugcina iimpahla kwindawo yokugcina iimpahla. Isebenzisa iingcango ezimhlophe ezibini ezimhlophe kunye neglasi enqabileyo yelixesha.
Imithi emihle ehlanguliweyo yayisetyenziselwa i-countertop kunye namashalofu kule ndawo elula yokuhlamba impahla. Iikhabhathi zensimbi eziluhlaza ngokuqinisekileyo zimile ngokuchasene neendonga ezimhlophe zezitena, kwaye ukongezwa kwezityalo zangaphakathi kwenza ukuba indawo izive iphilile.
Incinci uyilo lwegumbi lodaka Indawo yokuhlala ikwayimbono entle kumagumbi amancinci okuhlamba. Ngale ndlela unokuba nendawo efanelekileyo yokuthatha nokukhulula izihlangu kunye neebhatyi xa ungena ekhaya.
Uziva ugcwele njengoko igumbi lakho lokuhlamba lingenazo iifestile, zama ukugcina iskimu sombala wakho sikhanya kwaye siqaqambile ukumelana nobumnyama bendawo. Lo mzekelo ubonakalisa yonke ikhabhinethi emhlophe edityaniswe neendonga eziluhlaza eziluhlaza.
Ukufakwa kwephahla okumhlophe okukhanyayo kunokunceda ukukhanyisa igumbi lokuhlamba elingaphantsi kwaye kulinike ubomi obutsha. Iipaneli zesilingi zilula kwaye azibizi kakhulu kwimowudi yokuhlamba iimpahla ye-DIY.
umdlalo wesihlangu somtshato imibuzo ehlekisayo
Ukuba awukwazi ukuba negumbi lokuhlambela elinikezelweyo, ungabeka nendawo yakho yokuhlamba ekhitshini, njengoko sele inenkqubo yokufaka imibhobho yamanzi. Oku kuqhelekile kumagumbi amancinci kwaye oomatshini bokuhlamba iimpahla babekwa phantsi kweekhawuntari kufutshane nesinki.
Akukho sithuba? Akukho ngxaki. Nokuba ziqinile, iindawo ezinjenge-closet zinokujikwa zibe ligumbi lokuhlamba iimpahla elicwangcisiweyo. Esi sithuba sihlangeneyo sineepeyile zesamente ezipeyintwe ngesandla kwimigangatho, edityaniswe neendonga ezithe nkqo zemikhumbi ukunika umbono wobude obongeziweyo kwisithuba. Umphezulu woomatshini bokuhlamba wawulungiswe kunye nomphezulu womthi onokuba luncedo ekulungiseleleni iimpahla zokuhlamba iimpahla okanye uku-ayina iimpahla. Indawo eseleyo ngaphezulu yayisetyenziselwa ngokufanelekileyo indawo yokugcina eyongezelelweyo.
Ukuba unegumbi eliqinileyo lokuhlamba impahla ngolu hlobo, ukuqokelela isherher yakho kunye nesomisi ngokuthe nkqo ngokuqinisekileyo kuya kukunceda ugcine indawo. Gcina ukukhanya kwesikimu sombala ukuze indawo ijongeke inkulu. Iikhabhathi zebisque kunye neendonga zongeza nje ubushushu obufanelekileyo kule ndawo incinci.
Eli gumbi lokuhlamba laguqulwa lasuka kwigunjana lakudala ngoko ke iikhabhathi zazigcinwa ukuze zisetyenziswe kakuhle.
Guqula ikhabethe lakho lakudala libe kwigumbi elincinci lokuhlamba iimpahla! Le khabhathi incinci ineqonga / istendi somthi apho babebekwa khona oomatshini ukuze indawo ifikeleleke ngakumbi. Ukongeza, indawo engezantsi yayisetyenziselwa ukugcina (iibhasikithi) kwaye ngaphezulu kwalungiswa ngeshelufu yesinyithi evumela nokugcinwa kwezinto ezahlukeneyo.
Le ndawo yokuhlamba encinci iphantsi ayicingi nje kuphela malunga nendawo yoomatshini kunye nokugcinwa kwayo, kodwa yongeza inoksi encinci yenja kunye nendawo emanzi apho unokuhlamba khona okanye uhlambe izandla iimpahla ezibuthathaka. Bona Okuninzi ugqibile izimvo ezingaphantsi kwiphepha lethu legalari.
izipho ezinkulu zomamazala
indlela yokwenza isaphetha
unalo nini itheko lokuzibandakanya
yintoni isithandwa sentamo